၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (6 of 7) – Dhamma Training Center
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (6 of 7)
Everything changes, Nothing remains without change. zawgyi
Everything changes, Nothing remains without change. ဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအတိုင်း မြစ်ရေများ မနားတမ်း တစ်သွင်သွင် စီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မအစဉ်သည်လည်း မနားတမ်း ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ၍ နေပါသည်။
ဤမျှ သက်တမ်းတိုတောင်းသော ရုပ်တရားများထဲမှ မည်သည့် စက္ခုဝတ္ထု = စက္ခု ပသာဒရုပ်က မြင်သိစိတ်ကို ရှေ့မှ ကြိုတင်ဖြစ်ကာ ကျေးဇူးပြုမည်နည်းဟု မေးစရာ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။
သေက္ခတောင်ဆရာတော် ဦးတိလောက ပြုစုတော်မူခဲ့သည့် ကျမ်းစာအုပ်တွင် ရုပ်ကလာပ်များ ဖြစ်တည်နေမှုကို အလွန်တိကျစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
“အခြေခံရုပ်ကလာပ်ကို ပရမတ္တရုပ်ကလာပ်ဟု မှတ်ကြ၊ ပရမတ်ရုပ် ကလာပ်မည်သည်ကား တစ်ပါးကို တစ်ပါး မမှီတွယ်ရဘဲ မဖြစ်နိုင်ကြ၊ မတည်နိုင်ကြ၊ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်၊ မတည်နိုင်ကြသောကြောင့် ဘယ်ရုပ်က အောက်က၊ ဘယ်ရုပ်က အထက်က၊ ဘယ်ရုပ်ကလက်ဝဲ၊ ဘယ်ရုပ်ကလက်ယာ၊ ဘယ်ရုပ်ကအတွင်း၊ ဘယ်ရုပ်က အပြင်ကဟု ရွေးချယ်မရဘဲ တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေကြ၏။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုစီကွဲသွားအောင် ခွဲခြား၍မရသော အ၀ိနိဗ္ဘောဂရုပ်များအဖြစ် စုစည်းနေကြ၏။ ထိုရုပ်များသည် သဟဇာတသဘောဖြင့် အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာ၍ ပျက်လျှင်လည်း အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်း ပျက်ကြလေ၏။ မြေဓာတ် လွန်ကဲသော ပရမတ္တရုပ်ကလာပ်ပေါင်း သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေလောက် သမူဟကလာပ်များ ပေါင်းစုဖွဲ့ကြလျှင် ပရမာဏုမြူ ဖြစ်လာ၏။ ထိုပရမာဏုမြူ၏ အထည်ပမာဏ အရွယ်အစားကို ဤသို့သိရမည်”
“ဦးခေါင်းက သန်းတစ်ကောင်ကို ခုနှစ်စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်စာသည် လိက္ခာမည်သော ပိုးတစ်ကောင်နှင့် ညီမျှသည်” (ထိုလိက္ခာပိုးသည် ၀ဲနာ၊ ယားနာ ဖြစ်စေသောပိုးဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ဆေးသိပ္ပံက အတည် ပြုကြပါသည်။)
“ထိုပိုးကောင်ငယ်တစ်ကောင်ကို ၃၆-စိတ် စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် ရထရေဏုမြူတစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”
“ရထရေဏုမြူတစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် တဇ္ဇရီမြူတစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”
“တဇ္ဇရီမြူတစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် အနုမြူ Atom တစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”
“အနုမြူ ဗအသာ တစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် ပရမာဏုမြူ Partical တစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”
Energy မျှသာရှိပြီး Weight. Mass. Form. Dimension မရှိပေ
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အဘိဓမ္မာတရားတော်အရ အနုမြူ Atom တစ်လုံးတွင် ပရမာဏုမြူ Partical ၃၆-မျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း နားလည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များကရုပ် Matter ကို အထပ်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ လေ့လာသောအခါရုပ်၌ အနှစ်အဆံ တစ်စုံတစ်ရာမှ မတွေ့ရှိတော့ဘဲ စွမ်းအင် Energy အဖြစ်သာ ရှိကြောင်း ဖော်ပြကြပါသည်။ ထိုစွမ်းအင် Energy မျှသာ ရှိသော သဘောတရားတွင် ရုပ်တစ်ခု၌ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် Weight အလေးချိန်၊ Mass ဒြပ်ထုသဘော၊ Form အဆင်း သဏ္ဍာန်၊ Dimension အရွယ်အစားပမာဏတို့ မရှိကြောင်းကို ယနေ့ ရူပဗေဒ သိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာပါသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်က ရုပ်တွင် ထာဝရတည်မြဲသည့် အထည် ဒြပ်မရှိတော့ကြောင်း သက်သေထူပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကျော်ကပင် သိရှိတော်မူပြီး ‘ရူပံ ဘိက္ခဝေ အနတ္တ’ ဟု ဟောကြားတော်မူသည့် တရား တော်နှင့် ယနေ့တွေ့ရှိချက်သည် လွန်စွာမှ ညီညွတ်နေပေတော့သည်။
ယနေ့သိပ္ပံပညာများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ပင် အလွန့် အလွန်သေးငယ်သည့် အဏုမြူဓာတ်မှုန်များဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ထိုအဏုမြူဓာတ်မှုန်လေးတစ်ခုကို အက်တမ် Atom ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။ ထိုအက်တမ်ကို ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သောအခါ ပရိုတွန် Proton နျူထရွန် Neutron နှင့် အီလက်ထရွန် Electron တို့ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိကြပါသည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ထိုအက်တမ် Atom တစ်ခုထက် ပိုပြီး ပေါင်းစပ်ကြီးထွားလာပါက မော်လီကျူး Molecule ဟု ခေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူတိုင်းသိကြသည့် ရေ H2O ကို မော်လီကျူး Molecule ဟုခေါ်သည်။ ထိုမော်လီကျူး Molecule များစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းလာသောအခါ ဆဲလ် cell ဟူသော် ကလပ်စည်းများ ဖြစ်လာပါသည်။ လူ၏န္ဓာကိုယ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်း 30 Trillions ခန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (1 Trillion =000,000,000,000 ။ ၁-နောက်က သုည ၁၂-လုံးရှိသည့် သင်္ချာကို ၁-ထရီလီယန် ခေါ်ပါသည်။)
လူတစ်ယောက်၌ ၁-စက္ကန့်လျှင် cell ဟူခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်3း000,000,000 သုံးဘီလီယန် သေကြေ ပျက်စီးနေပါသည်။ အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီး ဖြည့်ပြီးဖြစ်နေသည်ကလည်း အရေအတွက် တူညီနေပါသည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ကလပ်စည်းများ သေကြေပျက်စီးသည့်နှုန်းကများပြီး ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် အသစ်ဖြစ်သည့် ကလာပ်စည်းက နည်းပါးလာလေသည်။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပ္ပံက ဆိုလေသည်။
မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖြစ်နေသည့် ထိုထိုအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါသော်လည်း အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပမှု နည်းပါးလာပါသည်။ အရေပြားများ တောင့်တင်းမှုမရှိဘဲ လျှော့ရဲကာ တွဲကျလာသည်ကိုမူ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
သိပ္ပံပညာ၏တွေ့ရှိချက်တွင် cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခုခြင်းစီ၊ တစ်ခုခြင်းစီသည် အငြိမ်မနေဘဲ လှုပ်လှုပ် ရွရွ၊ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြောင်းနှင့် အသေအချာ လေ့လာကြည့်သောအခါတွင် ကလပ်စည်း တစ်ခုခြင်းသည် သူတို့၏တာဝန် ပြီးဆုံးသည်နှင့် ပျက်၍ ပျက်၍ ပျက်၍သွားနေသည့် အစဉ်အတန်းကြီးကို ပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာ ကြပါသည်။ သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ်က ဤဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့မှ ခံစားမှု မရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ ပကတိမျက်စိနှင့်လည်း မမြင်ကြရပေ။
cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခု ပျက်စီးနေသည့်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ဆဲလ်တစ်ခု အသက်ရှင်နိုင်သည့် သက်တမ်းမှာ Nano one second သာ ရှိလေသည်။ Nano one second ဟူသည် ၁-စက္ကန့်၏ သန်းတစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင် ၁-စက္ကန့်ကို 1 000,000,000 သန်းတစ်ထောင်နှင့်စား၍ ရသည့်အချိန်ကို Nano one second ဟုခေါ်ပါသည်။ အမေ့ဗိုက်ထဲတွင် သန္ဓေတည်သည့် အချိန်ကစ၍ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖြစ်၍၊ ပျက်၍နေပါသည်။
ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် စိတ်၏အသက် ခဏငယ် (၁၇ _ ၃ = ၅၁) ချက်နှင့် ညီမျှ၏။ ရုပ်၏ ဥပါဒ် ခဏနှင့် ဘင်ခဏသည် ခဏေငယ်တစ်ချက်စီသာ ကြာပါသည်။ ရုပ်၏ဌီခဏမှာမူ ခဏငယ် ၄၉-ချက် ကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက် ကာလတိုအတွင်း၌ ရုပ်ကလာပ်ပေါင်း ကုဋေပေါင်း ၅၈၀၀-ကျော် ပေါ်ပြီးပျောက် ဖြစ်ပြီး ပျက်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် ၁-စက္ကန့်ထက်ပင် တိုတောင်းသော လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက်အချိန်၏ ကုဋေ ၅၈၀၀-ပုံ တစ်ပုံခန့်သာ ရှိလေသည်။
Everything changes, Nothing remains without change. pyidaungsu-unicode
Everything changes, Nothing remains without change. ဟူသော မွတျဗုဒ်ဓ၏ အဆုံးအမအတိုငျး မွဈရမြေား မနားတမျး တဈသှငျသှငျ စီးဆငျးနသေကဲ့သို့ ရုပျဓမ်မ နာမျဓမ်မအစဉျသညျလညျး မနားတမျး ဖွဈပကျြ ပွောငျးလဲ၍ နပေါသညျ။
ဤမြှ သကျတမျးတိုတောငျးသော ရုပျတရားမြားထဲမှ မညျသညျ့ စက်ခုဝတ်ထု = စက်ခု ပသာဒရုပျက မွငျသိစိတျကို ရှမှေ့ ကွိုတငျဖွဈကာ ကြေးဇူးပွုမညျနညျးဟု မေးစရာ ပျေါပေါကျလာပါသညျ။
သက်ေခတောငျဆရာတျော ဦးတိလောက ပွုစုတျောမူခဲ့သညျ့ ကမျြးစာအုပျတှငျ ရုပျကလာပျမြား ဖွဈတညျနမှေုကို အလှနျတိကစြှာဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။
“အခွခေံရုပျကလာပျကို ပရမတ်တရုပျကလာပျဟု မှတျကွ၊ ပရမတျရုပျ ကလာပျမညျသညျကား တဈပါးကို တဈပါး မမှီတှယျရဘဲ မဖွဈနိုငျကွ၊ မတညျနိုငျကွ၊ ထိုသို့မဖွဈနိုငျ၊ မတညျနိုငျကွသောကွောငျ့ ဘယျရုပျက အောကျက၊ ဘယျရုပျက အထကျက၊ ဘယျရုပျကလကျဝဲ၊ ဘယျရုပျကလကျယာ၊ ဘယျရုပျကအတှငျး၊ ဘယျရုပျက အပွငျကဟု ရှေးခယျြမရဘဲ တဈခုတညျး ဖွဈနကွေ၏။ ထို့ကွောငျ့ တဈခုစီကှဲသှားအောငျ ခှဲခွား၍မရသော အဝိနိဗ်ဘောဂရုပျမြားအဖွဈ စုစညျးနကွေ၏။ ထိုရုပျမြားသညျ သဟဇာတသဘောဖွငျ့ အကုနျလုံး အတူတကှ တပွိုငျတညျးဖွဈပျေါလာ၍ ပကျြလြှငျလညျး အကုနျလုံး အတူတကှ တပွိုငျတညျး ပကျြကွလေ၏။ မွဓောတျ လှနျကဲသော ပရမတ်တရုပျကလာပျပေါငျး သိနျး၊ သနျး၊ ကုဋလေောကျ သမူဟကလာပျမြား ပေါငျးစုဖှဲ့ကွလြှငျ ပရမာဏုမွူ ဖွဈလာ၏။ ထိုပရမာဏုမွူ၏ အထညျပမာဏ အရှယျအစားကို ဤသို့သိရမညျ”
“ဦးခေါငျးက သနျးတဈကောငျကို ခုနှဈစိတျစိတျသျော တဈစိတျစာသညျ လိက်ခာမညျသော ပိုးတဈကောငျနှငျ့ ညီမြှသညျ” (ထိုလိက်ခာပိုးသညျ ဝဲနာ၊ ယားနာ ဖွဈစသေောပိုးဖွဈကွောငျး ယနေ့ ဆေးသိပ်ပံက အတညျ ပွုကွပါသညျ။)
“ထိုပိုးကောငျငယျတဈကောငျကို ၃၆-စိတျ စိတျသျော တဈစိတျသညျ ရထရဏေုမွူတဈခုနှငျ့ ညီမြှ၏”
“ရထရဏေုမွူတဈလုံးကို ၃၆-စိတျစိတျသျော တဈစိတျသညျ တဇ်ဇရီမွူတဈခုနှငျ့ ညီမြှ၏”
“တဇ်ဇရီမွူတဈလုံးကို ၃၆-စိတျစိတျသျော တဈစိတျသညျ အနုမွူ Atom တဈခုနှငျ့ ညီမြှ၏”
“အနုမွူ ဗအသာ တဈလုံးကို ၃၆-စိတျစိတျသျော တဈစိတျသညျ ပရမာဏုမွူ Partical တဈခုနှငျ့ ညီမြှ၏”
Energy မြှသာရှိပွီး Weight. Mass. Form. Dimension မရှိပေ
ထို့ကွောငျ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ အဘိဓမ်မာတရားတျောအရ အနုမွူ Atom တဈလုံးတှငျ ပရမာဏုမွူ Partical ၃၆-မြိုးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားကွောငျး နားလညျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
ယခုအခါ သိပ်ပံပညာရှငျမြားကရုပျ Matter ကို အထပျထပျခှဲခွမျးစိတျဖွာကာ လလေ့ာသောအခါရုပျ၌ အနှဈအဆံ တဈစုံတဈရာမှ မတှရှေိ့တော့ဘဲ စှမျးအငျ Energy အဖွဈသာ ရှိကွောငျး ဖျောပွကွပါသညျ။ ထိုစှမျးအငျ Energy မြှသာ ရှိသော သဘောတရားတှငျ ရုပျတဈခု၌ ရှိသငျ့ရှိထိုကျသညျ့ Weight အလေးခြိနျ၊ Mass ဒွပျထုသဘော၊ Form အဆငျး သဏ်ဍာနျ၊ Dimension အရှယျအစားပမာဏတို့ မရှိကွောငျးကို ယနေ့ ရူပဗဒေ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက တှရှေိ့လာပါသညျ။ ဤတှရှေိ့ခကျြက ရုပျတှငျ ထာဝရတညျမွဲသညျ့ အထညျ ဒွပျမရှိတော့ကွောငျး သကျသထေူပါသညျ။ မွတျစှာဘုရားက လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပေါငျး (၂၅၀၀)ကြျောကပငျ သိရှိတျောမူပွီး ‘ရူပံ ဘိက်ခဝေ အနတ်တ’ ဟု ဟောကွားတျောမူသညျ့ တရား တျောနှငျ့ ယနတှေ့ရှေိ့ခကျြသညျ လှနျစှာမှ ညီညှတျနပေတေော့သညျ။
ယနသေိ့ပ်ပံပညာမြား၏ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှငျ သာမနျမကျြစိဖွငျ့ မမွငျမတှနေို့ငျလောကျအောငျပငျ အလှနျ့ အလှနျသေးငယျသညျ့ အဏုမွူဓာတျမှုနျမြားဖွငျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျကို ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားကွောငျး ဖျောပွပါသညျ။ ထိုအဏုမွူဓာတျမှုနျလေးတဈခုကို အကျတမျ Atom ဟု အမညျပေးထားပါသညျ။ ထိုအကျတမျကို ထပျမံ၍ ခှဲခွမျးစိတျဖွာ သောအခါ ပရိုတှနျ Proton နြူထရှနျ Neutron နှငျ့ အီလကျထရှနျ Electron တို့ ပါဝငျနကွေောငျး တှရှေိ့ကွပါသညျ။
လူ့ခန်ဓာကိုယျတှငျ ထိုအကျတမျ Atom တဈခုထကျ ပိုပွီး ပေါငျးစပျကွီးထှားလာပါက မျောလီကြူး Molecule ဟု ချေါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ လူတိုငျးသိကွသညျ့ ရေ H2O ကို မျောလီကြူး Molecule ဟုချေါသညျ။ ထိုမျောလီကြူး Molecule မြားစနဈတကြ ဖှဲ့စညျးလာသောအခါ ဆဲလျ cell ဟူသျော ကလပျစညျးမြား ဖွဈလာပါသညျ။ လူ၏န်ဓာကိုယျကို ယဘေူယအြားဖွငျ့ cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးပေါငျး 30 Trillions ခနျ့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပါသညျ။ (1 Trillion =000,000,000,000 ။ ၁-နောကျက သုည ၁၂-လုံးရှိသညျ့ သင်ျခြာကို ၁-ထရီလီယနျ ချေါပါသညျ။)
လူတဈယောကျ၌ ၁-စက်ကနျ့လြှငျ cell ဟူချေါသော ကလပျစညျးပေါငျ3း000,000,000 သုံးဘီလီယနျ သကွေေ ပကျြစီးနပေါသညျ။ အသဈအသဈဖွဈပွီး ဖွညျ့ပွီးဖွဈနသေညျကလညျး အရအေတှကျ တူညီနပေါသညျ။ အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ ကလပျစညျးမြား သကွေပေကျြစီးသညျ့နှုနျးကမြားပွီး ပွနျလညျဖွညျ့တငျးရနျ အသဈဖွဈသညျ့ ကလာပျစညျးက နညျးပါးလာလသေညျ။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပ်ပံက ဆိုလသေညျ။
မိမိတို့၏ ခန်ဓာကိုယျတှငျဖွဈနသေညျ့ ထိုထိုအခွအေနအေရပျရပျကို ပကတိမကျြစိဖွငျ့ မမွငျနိုငျပါသျောလညျး အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ အသားအရေ ကွညျလငျတောကျပမှု နညျးပါးလာပါသညျ။ အရပွေားမြား တောငျ့တငျးမှုမရှိဘဲ လြှော့ရဲကာ တှဲကလြာသညျကိုမူ တှမွေ့ငျနိုငျပါသညျ။
သိပ်ပံပညာ၏တှရှေိ့ခကျြတှငျ cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးတဈခုခွငျးစီ၊ တဈခုခွငျးစီသညျ အငွိမျမနဘေဲ လှုပျလှုပျ ရှရှ၊ လှုပျလှုပျရှရှဖွဈပွီး လှုပျရှားနကွေောငျးနှငျ့ အသအေခြာ လလေ့ာကွညျ့သောအခါတှငျ ကလပျစညျး တဈခုခွငျးသညျ သူတို့၏တာဝနျ ပွီးဆုံးသညျနှငျ့ ပကျြ၍ ပကျြ၍ ပကျြ၍သှားနသေညျ့ အစဉျအတနျးကွီးကို ပညာရှငျမြားက တှရှေိ့လာ ကွပါသညျ။ သို့သျော လူပုဂ်ဂိုလျက ဤဖွဈစဉျကို မညျသို့မှ ခံစားမှု မရှိနိုငျသကဲ့သို့၊ ပကတိမကျြစိနှငျ့လညျး မမွငျကွရပေ။
cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးတဈခု ပကျြစီးနသေညျ့နှုနျး (သို့မဟုတျ) ဆဲလျတဈခု အသကျရှငျနိုငျသညျ့ သကျတမျးမှာ Nano one second သာ ရှိလသေညျ။ Nano one second ဟူသညျ ၁-စက်ကနျ့၏ သနျးတဈထောငျပုံ တဈပုံ ဖွဈပါသညျ။
တဈနညျးပွောရလြှငျ ၁-စက်ကနျ့ကို 1 000,000,000 သနျးတဈထောငျနှငျ့စား၍ ရသညျ့အခြိနျကို Nano one second ဟုချေါပါသညျ။ အမဗေို့ကျထဲတှငျ သန်ဓတေညျသညျ့ အခြိနျကစ၍ အဆိုပါ ဖွဈစဉျအတိုငျး ဖွဈ၍၊ ပကျြ၍နပေါသညျ။
ရုပျကလာပျတဈခု၏ အသကျသညျ စိတျ၏အသကျ ခဏငယျ (၁၇ _ ၃ = ၅၁) ခကျြနှငျ့ ညီမြှ၏။ ရုပျ၏ ဥပါဒျ ခဏနှငျ့ ဘငျခဏသညျ ခဏငေယျတဈခကျြစီသာ ကွာပါသညျ။ ရုပျ၏ဌီခဏမှာမူ ခဏငယျ ၄၉-ခကျြ ကွာပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လကျဖဈြ ၁-တှကျ၊ မကျြစိတဈမှိတျ၊ လြှပျတဈပကျြ ကာလတိုအတှငျး၌ ရုပျကလာပျပေါငျး ကုဋပေေါငျး ၅၈၀၀-ကြျော ပျေါပွီးပြောကျ ဖွဈပွီး ပကျြနကွေပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရုပျကလာပျတဈခု၏ အသကျသညျ ၁-စက်ကနျ့ထကျပငျ တိုတောငျးသော လကျဖဈြ ၁-တှကျ၊ မကျြစိတဈမှိတျ၊ လြှပျတဈပကျြအခြိနျ၏ ကုဋေ ၅၈၀၀-ပုံ တဈပုံခနျ့သာ ရှိလသေညျ။